See more of L'OCCITANE en Provence on Facebook
Beauty Supply Store in Yangon
5,583,733 people like this
5,583,826 people follow this
+959730 75715
Beauty Supply Store · Cosmetics Store · Beauty/Cosmetics Company
Hair & Beauty Supply in Yangon
#BACKTONATURE L'OCCITANE မှအမျိူးသားများအတွက် ထုတ်လုပ်လိုက်သော Cedrat Men Skincare Range.......
Gift the Magic of Provence More information: http://mm.loccitane.com Available at L’occitane Boutique: Myanmar Plaza (Ground Floor), Junction Square (Ground Floor) and Marketplace 6.5miles Free Home Delivery for Any Purchase of MMK 50,000 and above – 0973075715, 09767297964
Find your perfect match with our male fragrances 💯 Whether you prefer fresh scents or more intense, spicy notes, you’ll find what you want at L’Occitane!
· February 15 at 11:36pm ·
Happy Chinese New Year! L'OCCITANE Myanmar wishes youafantastic year of the Dog! 🐶 🐕
Prep for Chinese New Year festivities starts here 🐶 Pamper yourself from top to bottom to feel, smell and look 💯
Roses are Red, Violets are Blue, Our Shea Butter hand creams, Will always love you 💕
Posted by L'OCCITANE en Provence
· February 13 at 3:52am ·
L’OCCITANE ချစ်တဲ့သူ လေးတွေ အတွက် အရမ်းကို ရင်ခုန် စိတ်လှုပ် ရှားရမယ့် အချိန် ကို ရောက်လို့ လာပါပြီ ရှင့်။
L’OCCITANE en Provence ၏ ချစ်ရသော Customers များအတွက် ပြုလုပ်ပေးသော Valentine’s Day နေ့လေး မှာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ အထင်ကရ 5stars Hotel ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Strand Hotel တွင် ရင်ခုန်ကြည်နူးဖွယ် High Tea Set လေးကို ချစ်ရသူနဲ့ အတူတူ သုံးဆောင် ခွင့် လက်မှတ် လေးတွေ ရဲ့ ကံထူးရှင်လေးတွေ ထွက်ပေါ်လို့ လာပါပြီ။ L’OCCITANE Products လေးတွေ ကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ အားပေးရင်း ကံကောင်းသွားတဲ့ က...ံထူးရှင်လေးတွေ ကတော့ -
1. Khin Oo May
2. Khine Thazin Yuwah
3. Daw Thidargu Zeya
4. Yu Yu Win
5. Mrs Leung Miu Po နှင့်
6. Khattar တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ကံထူးရှင် လေးတွေ အားလုံး High Tea Set Coupons လေးများကို ယခု Junction Square Ground Floor တွင် အသစ်ဖွင့်လှစ် ထားသော L’OCCITANE en Provence ဆိုင်သစ် လေးတွင် မနက်ဖြန် လာရောက် ထုတ်ယူလို့ ရပါပြီရှင်။ Valentine’s Day နေ့ လေးတွင် မိမိ ချစ်ရသူ လေးတွေ နဲ့ အတူတူ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးနိုင် ကြပါစေ လို့ L’OCCITANE en Provence Myanmar Team မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း ပေး လိုက်ပါတယ် ရှင့်။
Dear L’OCCITANE Lovers,
L’OCCITANE en Provence Myanmar is very delighted to announce the winners for High-Tea Set Coupons at Strand Hotel on Valentine’s Day lucky draw program. The Winners are:
1. Khin Oo May,
2. Khine Thazin Yuwah,
3. Daw Thidargu Zeya,
4. Yu Yu Win,
5. Mrs Leung Miu Po, and
All the winners can redeem the respective coupon at our new Junction Square L’OCCITANE store starting from tomorrow.
L'OCCITANE en Provence shared Phyodaybyday's post.
· February 12 at 7:56pm ·
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ထုံမွှမ်းနေတဲ့ အချစ်လ လေးလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ဒီ ဖေဖော်ဝါရီ လရဲ့ Valentine’s Day နေ့လေးမှာ နိုင်ငံကျော် ပြည်သူ့ အချစ်တော် ဖြိုး (Phyodaybyday) Beauty Blogger မှ သူမ၏ ချစ်လှစွာသော FAN များအတွက် “A Day of Love With PhyoDayByDay” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ FAN Meeting လေး တစ်ခုကို LOTTE Hotel တွင် ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်တစ်ဖက် နဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီး ကလေး မေမေ များအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမည့် အကြံဥာဏ် အတွေ့အကြုံ များကို “Voice of the Beautiful Wor...king Mom” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဝေမျှသွားမည့် အပြင် အလှအပ ချစ်သူ ပျိုမေတွေအားလုံးအတွက် လည်း နာမည်ကြီး Beauty Products Brands များမှ Product Knowledge များအကြောင်းကိုလည်း မျှဝေဆွေးနွေးရင်း ပျော်စရာ Self Makeup Workshop အစီအစဉ်လေးတွေ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။
ဒီပွဲလေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ L’OCCITANE EN PROVENCE မိသားစုမှလည်း Diamond Sponsor အဖြစ် ပါဝင် ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးဖူးသူတိုင်း၏ သဘောနှစ်ခြိုက်မှုအပြည့် ကို ရရှိထားသော L’OCCITANE EN PROVENCE ဟာဆိုရင် ၁၉၇၆ ခုနှစ် မှစ၍ ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ Provence ခေါ်မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့တွင် Brand ၏ ပဲ့ကိုင်ရှင် Olivier Baussan မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ L’OCCITANE သည် ခေါင်းအစခြေအဆုံးလိုအပ်သော အသားအရေထိန်းသိမ်းပေးသည့် ပစ္စည်းများကိုပြင်သစ်နိုင်ငံဧ။် သဘာဝ ပန်းအဆီအနှစ်များများ အပြင် တခြား အာနိသင် အစွမ်းထက်လှသော သဘာဝမှ ရသော ပစ္စည်း Natural Products များကိုသာ အခြေခံကာ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့် မည့်သည့် နိုင်ငံသားမဆိုစိတ်ချယုံကြည်စွာသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
L’OCCITANE Brand တွင် အသားအရေ လိုအပ်ချက် အလိုက် အရေပြားကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် Immortelle, Almond, Shea Butter, Rose, Cherry, Peony, Lavender, Reine Blanche,Verbena နှင့် Aromachologie စသည်တို့ဖြင့် ဖော်စပ်ထားသောပစ္စည်းများအပြင် ဆံကေသာထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်း များ၊ အမွှေးအကြိုင် နှင့် အလှအပရေးရာပစ္စည်းများလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခု ဒီ ၁၄.၂.၂၀၁၈ နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပွဲလေးတွင်လည်း ဖြိုးမှ L’OCCITANE EN PROVENCE တွင် ရရှိနိုင်သော အဓိက Hair Products များ အကြောင်းကို ဝေမျှပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ပွဲသို့ လာရောက် ကြသော ဧည့်သည်တော်များအတွက် ထိုပွဲလေးတွင် L’OCCITANE Products လေးများကို ၀ယ်ယူ အားပေးရာတွင်၂၀ % လျော့ဈေးများ ထားရှိပေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ အားလုံး ပဲ ဖြိုးပြောပြမယ့် ဗဟုသုတ လေးတွေကို လာနားထောင်ရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မပျက်မကွက် ပွဲလေးမှာ လာရောက် ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေလို့ L’OCCITANE EN PROVENCE MYANMAR TEAM မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးရင်း ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Phyodaybyday added2new photos.
February 12 at 1:46am ·
ကဲ !!! ဒီတစ်ခါတော့ ဒုတိယမြောက် Diamond Sponsor ကို ကျေးဇူးတင်ပါမယ် ။
ဖြိုးချစ်ရတဲ့ L'OCCITANE en Provence ပါ ။ ကိုယ်အရမ်းနှစ်သက်ပြီး အမြောက်အများဝယ်ဖြစ်နေတဲ့ ထ...ိပ်တန်း brand တစ်ခုရဲ့ support ကိုရတယ်ဆိုတာ ဖြိုးအတွက်တော့ အိပ်မက်တစ်ခုတစ်ကယ်ဖြစ်လာသလိုပါပဲ ။
LOCCITANE ကိုဆို အမြဲတမ်း follower တွေကို share ပေးနေကျမို့ သူတို့ဆီမှာသွားဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ်ညွှန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ လူတွေလာဝယ်ကြကြောင်း brand ကအသိအမှတ်ပြုရတဲ့အထိ ဖြိုးကိုယ်တိုင်ရော ဖြိုးရဲ့ follower တွေရောရဲ့ အားပေးယုံကြည်မှုကိုရထားတဲ့ brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
LOCCITANE en Provence Facebook : https://www.facebook.com/loccitane.mm/
ဖြိုး Loccitane ထဲကဆိုရင် Almond Range အကြောင်း ရေးထားဖူးတာလည်းရှိပြီး skincare video တွေမှာလည်း အမြဲပြောပြပေးဖြစ်တဲ့ brand တစ်ခုပါ ။
ကိုယ့် fav brand လည်းဖြစ် အမြဲညွှန်ပေးဖြစ်တဲ့ Loccitane ရဲ့ team ကလည်း A Day Of Love မှာအတူရှိနေမှာပါ ။ ပွဲကိုလာရောက်တဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ sample product တွေလက်ဆောင်ပေးမယ့်အပြင် အဲ့နေ့မှာဝယ်ယူမယ့် customer တွေအားလုံးကို ၂၀% special promotion ပေးသွားမှာပါတဲ့ ။
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပြီး အရမ်းလည်းချစ်ရပါကြောင်း LOCCITANE en Provence ကိုဒီကနေပြောပါရစေရှင် ။
အားလုံးပဲကောင်းသောညနေခင်းလေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင် ။ #phyodaybyday #ADayOfLovePhyoDayByDay
L'OCCITANE en Provence shared Ariel Thuta's video.
ဘယ်လို မိန်းကလေးမျိုး မဆို မိမိ ချစ်ရတဲ့ သူဆီကနေ ချစ်သက်လက်ဆောင် နှင်းဆီ ပန်းစီး 💐 လေးတွေ လိုချင်ရချင်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို နှင်းဆီပန်းလေးတွေ နေရာမှာ ပိုကောင်းတဲ့ L’OCCITANE en Provence’s ရဲ့ပျိုမေလေးတွေ အကြိုက် Roses et Reines Range လေးကိုသာ လက်ဆောင်ရလိုက်မယ်ဆိုရင် အတိုင်းမသိကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင် ရမှာပါ။ အသားပေါ်တွင် စွဲကျန်ရစ်သော နှင်းဆီ ပွင့်ဖက်လေးတွေရနံ့ ကြောင့် လူကို ရွှင်လန်းတက်ကြွစေကာ ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ နှင်းဆီပန်းခင်းကြီးတွေထဲရေ...ာက်သွားသလို ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းကို L’OCCITANE မှသယ်ဆောင်လာပေးမှာ အသေအချာ ပါပဲရှင်။ 🌹 🌹
ဒါကြောင့်မို့လို့ အချိန်တွေစွဲမနေပဲ ခုပဲ L’OCCITANE Myanmar Stores ဆိုင်များသို့ လာရောက်ပြီး စွဲမက်ဖွယ်ပန်းလေးတွေရဲ့ ရနံ့ ကို လာရောက် လေ့လာ ခံစား ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
We all love receiving bouquets of roses 💐 but it’s even better when they come in the form of L’OCCITANE en Provence’s Roses et Reines Range. Guaranteed to leave your skin smelling like petals of roses and fresh. So let’s escape to the rose gardens of southern France with L’OCCITANE! 🌹 🌹
Don’t waste the hours, come and smell the flowers available in all L’OCCITANE Myanmar Stores!
Locations: Myanmar Plaza, Junction City, Junction Square, 6.5miles Marketplace & Mingalar Mandalay
Ariel X L'occitane
Posted by Ariel Thuta
Ariel Thuta is with Mi Mi Khine Hello and Jason Ya.
February 11 at 3:24am ·
L'occitane ရဲ့ Rose series လေးကို ငယ် အသည်းစွဲဖြစ်နေတာ ဘာလို့လဲ သိချင်ရင် Videoလေး ကြည့်ကြည့်နော်။
With #GalentinesDay around the corner, it’s time to treat your favorite women in celebration of female friendship 💕
Who doesn’t wantarosy and even complexion? Where there’saPeony skin care routine, there’saway 💕
· February2at 9:30am ·
Keep hair healthy despite the cold with our Aromachologie hair treatments containing5Essential Oils 💪
For fine, fragile hair, use Body & Strength 1 Minute Intensive Care.
To protect hair fibres, pop on our Repairing Hair Mask for3minutes.
L'OCCITANE en Provence added3new photos.
· February2at 3:25am ·
💕 L’OCCITANE Special Valentine's Day Giveaway for High Tea Set at Strand Hotel 💕
ချစ်ခင်ရပါသော L’OCCITANE ချစ်သူများ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ
ရင်ခုန် ပျော်ရွှင် စရာကောင်းသည့် Valentine’s Day နေ့လေးဟာ တဖြေးဖြေးနီးလာပြီဖြစ်သည့် အတွက် မိမိ ချစ်ရသူတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်ကျော်နိုင်အောင် L’OCCITANE မှလည်း အားလုံးပျော်ရွှင်စေဖို့ အထူးသတင်းကောင်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ယခုလာမယ့် Valentine’s Day လေးမှာရန်ကုန်မြို့ကမ်းနားလမ်း ရှိတဲ့ လှပခန်းနားသော5⭐ ဟိုတယ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Strand Hotel မှာ မိ...မိချစ်ရတဲ့ သူလေး ကို L’OCCITANE ပစ္စည်းလေးတွေ လက်ဆောင်တွေပေးရင်း Romantic High Tea Set လေးကို တူတူ သုံးဆောင်ကာ ကြည်နူးဖွယ် Valentine’s Day လေးကို ဖြတ်သန်းနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးလေးပါ။
ကံစမ်းမဲ ပါဝင်ချင်သူများ အနေနဲ့ Myanmar Plaza, Junction Square, Junction City, 6.5mile Marketplace တို့ရှိ L’OCCITANE Counters များတွင် ကျပ် တစ်သိန်းဖိုး နှင့် အထက် ၀ယ်ယူ အားပေးမှု တိုင်းအတွက် The Strand Hotel တွင် High Tea Set Coupon ကံစမ်းမဲတစ်စောင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မဲဖောက်ပေးမှာကလည်း စုစုပေါင်း Coupon ၆ စောင် တောင် ဆိုတော့ Valentine’s Day အတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးလေးဖြစ်လို့ ခုပဲ L’OCCTANE Counters တွေမှာ အမြန်ဆုံး ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် လာရောက် အားပေးရင်း ကံစမ်း ရအောင် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကံထူးရှင် လေးတွေ ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကြေငြာ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
· February2at 1:08am ·
Offer someone special the gift ofabeautiful Provençal morning with Terre de Lumière L’Eau 💕 The floral notes of this luxurious collection will keep them feeling fresh all day.
L'OCCITANE en Provence shared Beauty Zone - By Thazin Kyaw's post.
ချစ်ခင်ရသော L'occitane ချစ်သူတွေအတွက်...
ဆံသားတစ်ချောင်းစီကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးကာ တစ်မိနစ်အတွင်း နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေသော ဆံသားကိုရရှိစေသော Verbena Apres-Shampooing Conditioner အကြောင်းကို Beauty Blogger Thazin Kyaw မှ အသုံးပြုပုံ နှင့် တကွ အသေးစိတ်ရေးသားပေးထားပါတယ်။
အခုလို ရေးသားပေးသော Beauty Zone - By Thazin Kyaw ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်။ <3
Beauty Zone - By Thazin Kyaw added5new photos.
January 15 · Yangon, Myanmar ·
L'OCCITANE " Verveine Apres-Shampooing Conditioner " Review + Give Way <3
Hello အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင့်…
သဇင့်ကို ဆံပင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး review လေးတွေ မေးနေကြတဲ့ သူ...လေးတွေအတွက် သဇင်သုံးတာ ၄လလောက်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ Verbena Shampooing Conditioner လေးအကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော် <3
🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃
သဇင်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ပတ်လောက်က ဆံပင်ဆေးဆိုးလိုက်လို့ ဆိုးဆေးတွေထုံးစံအတိုင်း ဆံသား ကြမ်းတမ်းသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလျော်ရည်တစ်မျိုးထဲက ဆံသားကို နူးညံ့ ပျော့ပျောင်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ထပ်ပြီး Conditioner သုံးမှသာ ပျော့ဆင်းပြီး ဆံပင်ပုံသွင်းရလွယ်ကူစေပါတယ်။သဇင် ဒီ Conditioner လေးမရခင်က ကြိုက်တဲ့ Conditioner လေးက Korea Brand တစ်ခုရဲ့ ဆံပင်ဆိုးဆေးဘူးထဲမှာပါတဲ့ Conditioner သေးသေးလေးပါ။သူကလည်း ချက်ချင်း ဆံပင်ကို တစ်မိနစ်လောက် ပွတ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ ပျော့ဆင်းသွားလို့ အရမ်းကြိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အထုတ်လေးက တစ်ခါသုံးဖြစ်တာရယ်။ဆိုးဆေးဘူးကြီးဝယ်မှရတာကြောင့် အဲ့လို Conditioner ကောင်းကောင်းလေးကို ဘူးအကြီးကြီး ရှိရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၄လလောက်က L'occitane က Hair Spray လေးဝယ်ရင်း Verbena Products တွေရဲ့ အနံ့လေးက Fresh ဖြစ်လို့နမ်းကြည့်ရင်း Beauty Advisor လေးက အရမ်းကောင်းတယ် ချက်ချင်းဆံသားကို ပျော့ဆင်းသွားစေတယ်လို့ အကြံပေးလို့ ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
🍃 ဒီ Verbena Conditioner လေးဟာ L'OCCITANE ရဲ့ စုံလင်လှတဲ့ Range တွေအများကြီးထဲကမှ ကိုယ်ခန္ဓာ / ဦးရေပြား နှင့် စိတ်ကို လန်းဆန်းတက်ကြွသွားစေသော Fresh ဖြစ်တဲ့အနံ့လေးပါရှိတဲ့ သဘာဝဆေးဖက်ဝင် Verveine အရွက်လေးတွေနှင့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Conditioner လေးဖြစ်ပါတယ်။
🍃 ဒ့ါအပြင် ဆံသားကို အားကောင်းပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေသော Glycerine နှင့် အခြားသဘာဝ ဆေးဖက်ဝင် Natural Ingredientsလေးရဲ့ အဆီအနှစ်လေးတွေလည်း ထပ်မံပါဝင်အားဖြည့်ထားလို့ ဆံသားပေါ်ကို တင်ပြီး ပွတ်လိုက်ရုံနဲ့ မယုံနိုင်အောင် ဝပ်ဆင်းပြီး ပျော့ပျောင်းသွားတာ ချက်ချင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Ultra-light formula ကြောင့် ဦးရေပြားကို နဂိုထက်ပိုပြီး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းလာစေပါတယ်။
🍃 နောက်နေ့ခေါင်းလျော်တော့ သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လုံးဝအံ့သြလောက်အောင် တကယ်ကို ပျော့ဆင်းသွားပြီး နူးညံ့သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။သဇင်အပြောမဟုတ်ပါဘူး။သုံးဖူတဲ့ သူအကုန်လုံးလဲ အဲ့လိုပဲ Recommand ပေးကြမှာပါ။အိမ်ခနလာနေတဲ့ အဒေါ်ကလည်း ကြိုက်လို့ ဝယ်ပေးဖို့တောင်ပြောဖူးပါတယ်။
🍃နောက်ပိုင်း ခေါင်းလျော်တာ ကြာလာတော့ ဆံသားသိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။အရင်ထက်ပိုပြီး Shine ဖြစ်လာတယ်။ပိုထူလာတယ်။နောက်ဆုံးအားသာချက်တစ်ခုက ဆံသားအားကောင်းသန်မာလာတဲ့အတွက် ပိုပြီး ဆံပင်ရှည်တာသိလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ဆံပင်မြန်မြန်ရှည်ချင်လို့ ဘာလေးတွေသုံးရမလဲ လာမေးကြတဲ့ ညီမလေးတွေကိုလည်း ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်ဖို့နည်းလမ်းလေးတွေကော ဒီConditioner လေးသုံးကြည့်ဖို့ကော ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။
🍃 အနံ့လေးကတော့ ယောကျာ်းလေးကော မိန်းကလေးကော အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကော အကြိုက်တွေ့စေတဲ့ သံပုရာသီးအနံ့ဆန်ဆန် Fresh ဖြစ်တဲ့ အနံ့လေးဖြစ်တဲ့အတွက် အမူးအမော်ပြေစေတဲ့အပြင် ခေါင်းလျော်ပြီး ၂ရက်လောက်ထိ ဆံသားမှာ အဲ့အနံ့လေးစွဲနေပါတယ်။
🍃 Size ကလည်း 500ml ဘူးအကြီးကြီးဖြစ်တာကြောင့် အခု ၄လကြာတဲ့အထိ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လေးပဲ ကုန်သေးပါတယ်။
ဘာအတွက်ကောင်းလို့ သဇင် Review လေးရေးရတာလည်းဆိုတာ သိပြီဟုတ် <3
How to use ? လေးလည်းပြောပြပေးပါဦးမယ်နော်
-ခေါင်းလျော်ပြီးရင် လက်ဖဝါးထဲ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏလေးထည့်ပြီး မိနစ် အနည်းငယ်လောက် နှစ်နယ်ပေးပြီး ပျက်စီးနေတဲ့ အောက်ဖျားလေးတွေကိုလည်း Conditioner လေးနဲ့ သေချာလိမ်းပြီးပွတ်ပေးပါ။
- ဒါပေမဲ့ ရေသေချာပြောင်အောင်ဆေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဘယ်Conditioner မဆိုး မစင်ရင် ဗေါက်ထတတ်လို့ပါ။
Give Way အနေနဲ့ L'OCCITANE ရဲ့6000ks တန် Give Coupon လေးကို သဇင်က မဲဖေါက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 🍃 🍃
Give Way လေးအတွက် ပထမဆုံး သဇင့်ရဲ့ BeautyZone Page လေးကို Like ပါ။ပြီးရင် ဒီPost လေးကို Like and Public Shareလုပ်ပေးပြီး Commentမှာ နံပါတ်စဉ်နဲ့အတူ ဆံသားဘယ်လိုပျက်စီးလို့ သုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို ရေးပေးခဲ့ပါနော်။
ဆံနွယ်လေးတွေ ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် :*
#BeautyZone #Thazinkyaw #loccitane #Conditioner
Puffy eyes don’t discriminate - it happens to men & women 😔 We’ve got you with Cedrat Energizing Eye Gel (for him) and Immortelle Regard Divin (for her)
New Year = New Beauty Resolutions with Shea Butter 💙
To all of our L’OCCITANE Lovers!
We wish you and your loved onesaHappy Holiday andaFantastic 2018!
Sending lots of love,...